quick လမ်းညွှန်: ပဲရစ် မှစ. Nice ရန်ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > quick လမ်းညွှန်: ပဲရစ် မှစ. Nice ရန်ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာ
ပဲရစ်နှင့်နိရထားများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိရောက်သည့်ရထားစနစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်ပြည်နယ်နှစ်ခုသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်ဘယ်သောအခါမျှမသွားပါတစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူ. နှစ်ပါးခြားနားဒေသများတွင်နှစ်စဉ်ဧည့်သည်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်. ပြင်သစ်၏တောင်ဘက်အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပြင်သစ် Riviera ၏စိတ်နှလုံးမှာ nice မုသာစကား. ပဲရစ်မြို့တော်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသောမြို့ဖြစ်၏, မြစ် Seine အပေါ်တည်ရှိပါသည်, ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း. ပဲရစ်၏ရင်ခုန်စရာမြို့နှင့် Nice ၏ကမ်းရိုးတန်းအလှတရားအကြားရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲသည်, ဒါပေမယ့်မီးရထားခရီးသွားလာနှင့်အတူ, သငျသညျရန်မလိုပါ. သေချာသင်အရှိဆုံးအံ့မခန်းခရီးစဉ်ရှိစေ, ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ရှိ ပဲရစ်ကနေ Nice မှရထားဖြင့်ခရီးသွားလာမှုအတွက်အကြံပေးချက်များ.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ပြင်သစ်အားလုံးကိုရထားအချိန်ပေါ်များမှာ, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်အကြောင်းပြချက်မှာစျေးနှုန်း. ပဲရစ်ကနေ Nice ဖို့ခရီးသွားလာသင်တစ်ဦးအပေါ်တိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ် အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်းရထား ထိုကဲ့သို့သော TGV ရထားအဖြစ်သို့မဟုတ်, သင်သည်တတ်နိုင်သည့်နှေးကွေးဒေသဆိုင်ရာရထား, အချို့သောအလွချိတ်ဆက်မြို့ကြီးများကိုမြင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ. သင်တို့သည်လည်းတစ်ခုယူနိုင်ပါသည် နေ့ချင်းညချင်းရထား. အဆိုပါ TGV ရထား အကြားပြေး 8 သို့ 10 တစ်ရက်ကို Paris Gare du Nord ဘူတာကနေ Nice Ville ဘူတာအထိ. ဒီရထားဟာ Nice ကို ၅ နာရီလောက်မှာရောက်လိမ့်မယ်. အမြန်ဆုံးဘတ်စ်ကားလိုင်းသည်သင်အား Paris မှ Nice သို့ ၁၂ နာရီအတွင်းရောက်သွားလိမ့်မည်.
သင်သည်ပဲရစ်မှ Nice သို့ရထားဖြင့်တိုက်ရိုက်ခရီးသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အစားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Marseilles နှင့် Lyon မြို့များမှအစားထိုးနိုင်သည်. အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဥစ္စာ! သငျသညျအခြို့သောအားလပ်ချိန်ရှိသည်ဆိုပါက, တဦးတည်းသွားရောက်ခြင်းစဉ်းစားပါ, သို့မဟုတ်ပင်နှစ်ခု, ပဲရစ်ကနေ Nice ရန်သင့်လမ်းပေါ်ဤအကြောင်းလှပသောပြင်သစ်မြို့ကြီးများ. မာဆေးအရှိဆုံးကမ်းလှမ်းကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Vibe နှင့်အတူတစ်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်၏ လှပသောရှုခင်း. The train station has အိတ် Locker တွေ ဒီတော့နာရီအနည်းငယ်ဒီမှာပယ်ရပ်တန့်ကပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်နိုင်ဘူး.
သင်တို့သည်လည်း Nice ရန်သင့်လမ်းအပေါ်လိုင်ယွန်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်. ဤသည်တိုးတက်နေတဲ့နှင့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမြို့ကျိန်းသေရှာဖွေစူးစမ်းရကျိုးနပ်သည်. ဤမြို့သည်အနုပညာများအတွက်ပြင်သစ်တွင်အခြားအချက်အချာဖြစ်ပြီး သမိုင်း နှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအစားအစာများအတွက်အသိအမှတ်ပြု.
မီးရထားဘူတာ ပဲရစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးသင်တို့ရှေ့မှရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်အတော်လေးရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. ရန်သေချာစေပါ စောစောရောက်သည် to find out which platform your train will leave from.
သငျသညျကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအပေါ်ဝယ်မဟုတ်လျှင်ကိုလည်းသင်ကသင်၏ခရီးစဉ်မတိုင်မီသင့်ရဲ့လက်မှတ်စိစစ်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်ပလက်ဖောင်းကိုရောက်ရှိမယ့်ရှေ့တော်၌များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအဝါရောင်စက်တွေ '' compostage က de billets '' ရှာဖွေပါ. It is important to validate your ticket as inspectors will check that this has been done when you are on the train.
ပဲရစ်ကနေ Nice မှရထားဖြင့်ခရီးသွားစဉ်းစား? ကိုသွားပါ အွန်လိုင်းတစ်ဦးကရထား Save to check out all our သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်း နှင့်စတင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း သင်၏နောက်စွန့်စားမှု! There are plenty of discounted fares available throughout different rail networks in France. you can also keepalookout for the latest discounts by following our Facebook က နှင့် တွစ်တာ စာမျက်နှာများလည်း.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-train-paris-nice/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelfrance travelnice travelparis traveltips